07 June 2013 - Fante online
Friday Sermon: Humility: A pre-requisite for patience and prayers - 7th June 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 7, 2013.
(Friday sermon – 7th June, 2013 – Fante Translation)
BOTOOYƐ: DZA ODZI ADƆNTSEN MA ABOTAR NA ASƆRYƐ
“Na hom mfa abotar na Asͻryɛ nhwehwɛ mboa; na ampaara dɛ dɛm adze yi yɛ dzen gyedɛ hͻn a wͻwͻ sunsum mu ahobrase. Nkorͻfo no a wonyim no pefee dɛ wobehyia hͻn Ewuradze no, na hͻn adwen da do dɛ Ne nkyɛn na wͻbɛsan akͻ no” (2:46-47).
Mbrɛ ͻbɛyɛ ma enya Adom nkitahidzi no ehiadze a dɛm Kuran mu nyiyimu yi na piinara so a ͻwͻ Kuran Krͻnkrͻn mu twe hɛn adwen gyina botooyɛ na ahobrase do. Mbransɛm nyinara ne farbaa a ͻbɛma yeenya Nyankopͻn enyigye nye botooyɛ na ahobrase. Anaaso yebotum aka dɛ sɛ eka Nyankopͻn Ne mbransɛm do a, ͻdze wo bͻkͻ botooyɛ na ahobrase ho; na dɛm ahyɛnsew yi ampaara wͻdze ahɛn gyedzinyi nokwarfo mu wͻ ber a odzi Nyankopͻn Ne mbransɛm do. Ɔreda no edzi dɛ “…..na ͻma botooyɛ dͻr wͻ hͻn mu” (17:110). Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ, Nyankopͻn N’asɛm no ma ahobrase na botooyɛ a ͻwͻ hͻn mu no dͻr.
Sɛ gyedzinyi da no edzi dɛ ͻgye Nyankopͻn dzi na ͻkenkan Nyankopͻn N’asɛm no, na ͻka dɛ ͻdze kͻ nyɛe do a, onnkotum enya iyinom gyedɛ ͻyɛ ahobrase na botooyɛ anaadɛ ͻnam no botooyɛ na ahobrase ntsi, som a ͻsom Nyankopͻn na ne ndzeyɛɛ tu kafo. Nyankopͻn N’akͻmhyɛfo aba wiadze abɛda dɛm botae yi edzi na wͻdze hͻn nhyira fasusu yi kyerɛɛe. Nyankopͻn N’akͻmhyɛfo no nyia ne fasusu dzi mu mapa nye Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN)ne fasusu a ͻyɛ nhyira no.
Anohoba Mɛsia (ANN) no sanee kaa dɛ: Allah Ɔsorsornyi No yɛ Mbͻbͻrhufo na Adͻyɛdze Kyekyɛfo. Ɔkͻ ͻdasanyi mboa wͻ kwan biara mu na Ohu no mbͻbͻr. Ɔnam N’ehumbͻbͻr ntsi na Ɔdze N’asomafo na N’asomfo baa ma woebeyi nkorͻfo efi hͻn bͻn asetsena mu. Mbom ahantan yɛ nsɛnadze a ͻyɛ hu. Ɔdze sunsum-wu ba onyia no a ͻhɛn no mu no. Minyim ampaara dɛ dɛm nsanadze yi yɛ dzen sen ewudzi. Nyia ͻyɛ ahantan no yɛ Abͻsam no nua abanyin osiandɛ ahantan na ͻmaa Abͻnsam n’enyim guu ase. Dɛm ntsi, ͻyɛ nhyɛ ma gyedzinyi dɛ ͻnnkɛyɛ ahantan. Sɛ yɛdan no so a, ͻkyerɛ dɛ ͻwͻ dɛ onya botooyɛ, ahobrase na obu. Nyankopͻn N’asomafo nnka woyinom ho, na wͻwͻ botooyɛ na ahobrase mbordo mbordo. Dɛm su yi tsenaa Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no mu seen obiara.
N’asomafo no mu kor, wobisaa no mbrɛ Nkͻmhyɛnyi (NNN) si nye no tsena. Obuaa dɛ, nokwar nye dɛ, Nkͻnhyɛnyi som somafo kyɛn dɛ somafo no som Nkͻnhyɛnyi no. O! Allah, hyira Muhammad na no nkorͻfo na dom no nhyira pii na bambͻ. Iyi yɛ mfatoho a ͻfa no brapa na botooyɛ ho. Ɔyɛ nokwar dɛ nkorͻfo bi wͻ obi ne nsɛfo mu a hͻn wͻsom no na wͻwͻ hͻ aber biara. Dɛm ntsi sɛ obi pɛ dɛ ohu obi no botooyɛ, n’ahobrase, ne pɛnkyɛr, ͻbodamu a, dɛm nkorͻfo no na wobisabisa hͻn (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat Vol.8 Pg.101).
Iyi nye fasusu a w’ehyira do a ͻwͻ dɛ Muslim Ummah oye dɛ wͻfa do. Sɛ Kuran Krͻnkrͻn hyɛ hɛn dɛ yɛndzi Nyankopͻn Ne mbransɛm do; mfatoho a odzi mu mapa no wͻakyerɛ no Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) mu. Sɛ yɛhwɛ no som a ͻyɛ nwanwansa yi a, Nyankopͻn aka dɛ, ͻmfa nto gua dɛ ͻnam Nyankopͻn ntsi na ͻrosom na ͻnnyɛ ne pɛ dɛ ͻbͻhwehwɛ biribi ama noara noho wͻ Nyankopͻn a ͻrosom No noho. Sɛ yɛhwɛ mpɛnpɛndo a ͻka dɛ “Ka dɛ M’asͻryɛ na m’afͻrbͻ na me bra na mowu nyinara yɛ Nyankopͻn dze, Wiadze nyinara Wura” (6:163), ͻkrͻn ara ma obiara nnkotum edu ho gyedɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) nko. Nyankopͻn ka fa abotar ho dɛ: “Na wͻammfa dɛm adze no amma obiara gyedɛ nkorͻfo a wogyina pintsinn na wͻmmfa mma obiara gyedɛ hͻn a wͻwͻ kyɛfa kɛse wͻ mudzi mu” (41:36). Sɛ yɛkenkan Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne bra ho nsɛm a, yehu dɛm mfatoho nwanwansa a ͻfa no fie nsɛmansɛma na akasakasa, apaamu nsɛmansɛma na akasakasa a ͻda no edzi dɛ ͻyɛ soronko.
Ɔdaa n’abotar soronko a ͻyɛ fasusu wͻ Taif na ͻgyee kurowpͻn no sii hͻ a wͻannsɛe no, mbom nna Nyankopͻn dze ne pɛ ahyɛ ne nsa dɛ ͻbɛyɛ kurowpͻn no biribiara a ͻpɛ. Hwɛ, yɛdze pira a wopiraa no to nkyɛn na Taif basabasayɛfo dza wͻyɛɛ a, ͻkaa dɛ dabida. Ayɛkayɛkadze a wͻdze yɛɛ hͻn mpo, ber a n’akadofo no kaa kyerɛɛ no dɛ ͻnyɛ asͻr ntsia nkorͻfo bi no, ͻyɛɛ asͻr dɛ wͻbɛma hͻn kwankyerɛ na otuu n’akadofo no fo dɛ wonsie abotar na ntsea papa no nnda asͻryɛ a ͻreyɛ etsia hͻn do, mbom dɛ yɛbɛyɛ akwankyerɛ asͻr ama hͻn na yɛakyerɛ abotar a wͻto no abaw a onnhyia akyerɛ hͻn. Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no botooyɛ a ͻyɛ fasusu no ͻkyerɛɛ no wͻ gyinabew biara mu. Ɔnam dɛm ntsi Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ: Wͻdze asɛnkyerɛdze a odzi mu mapa a ͻbɛma yɛatwe abɛn Nyankopͻn Otumfo No ho. Na Nyankopͻn ahyɛ hɛn dɛ yɛbosua yɛ. Na Nyankopͻn ama hͻn akwan horow na Ɔaka dɛ sɛ yɛka do a yɛbenya Noho mbɛnee.
Sɛ yedzi dɛm nhyehyɛɛ mapa yi ekyir a, Nyankopͻn akyerɛ dɛ sɛ yɛfa botooyɛ na ahobrase a yɛbenya Ne nkyɛn mbɛnee. Yɛbenya iyi efi nyimpa no a mber bi ͻmaa obi a ͻhyɛ n’ase tsee ase dɛ onnyi dɛ ͻtseetsee osiandɛ ͻyɛ nyimpa dɛ noara a ͻnuum ne maame n’enumfu na ne maame dzii edziban na ͻtsenaa ase dɛ ͻka nkorͻfo ho.
Nyiyimu a yɛkenkan ahyɛse kyerɛ dɛ yɛbɛfa botooyɛ na akwan a yebodua do atwe abɛn Nyankopͻn. Wͻaka ato hͻ dɛ, yɛatwe abɛn Nyankopͻn sɛ yenya botooyɛ a ͻkrͻn a. Yɛdze iyi si nkyɛn a, yennkotum edzi Nyankopͻn Ne mbransɛm no do, sɛ yɛanhwehwɛ Nyankopͻn N’adom emmfi botooyɛ mu a. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ yɛdze botooyɛ na ahobrase hwehwɛ Nyankopͻn No mboa wͻ N’adom ho. Nyankopͻn Ne nkyerɛkyerɛ wͻ Kuran Krͻnkrͻn mu wͻnam mbransɛm no do dze ama agyedzifo, dɛmara so na wͻnam nkorͻfo a wodzii hɛn enyim kan no hͻn ho nsɛm do dze ama agyedzifo. Biribiara a ͻwͻ Kuran mu no yɛ afotusɛm ma agyedzifo. Dɛm ntsi, wͻayɛ no nhyɛ dɛ yɛbɛfa botooyɛ na yɛabͻ mbͻdzen dɛ yɛbenya Nyankopͻn N’adom. Gyedɛ yenya sunsum a ͻma hɛn ntseasee dɛ “Na hom nhwehwɛ mboa” ansaana yeetum yeehu ahotsewee akwan no. Na sunsum a ͻka dɛ “Na hom nhwehwɛ mboa” no wͻdze botooyɛ na ahobrase kenyan no, na ͻwͻ dɛ yehu dɛ obi noara no tumyɛ nnkotum ayɛ no obi a ͻfata nhyira gyedɛ ͻyɛ Nyankopͻn N’adom ara kwa; na ͻyɛ Nyankopͻn N’adom nkotsee na obotum ahyɛ ͻbra a yɛrobͻ wͻ wiadze yi mu na ndaamba mã.
Ɔwͻ dɛ yɛsͻr ma Nyankopͻn wͻ botooyɛ mapa mu: O Nyankopͻn, Wo ehumbͻbͻr na adom mu no, bɛyɛ hɛn mboaa na kyerɛkyerɛ hɛn akwan a ͻbͻsͻ W’enyi na kyerɛkyerɛ hɛn akwan a wodua do som na abotar a ͻsͻ W’enyi. Wͻada no edzi dɛ sɛ erohwehwɛ Nyankopͻn No mboa wͻ dɛm nhyira yi ho a, ͻno kyerɛ botooyɛ na ma w’abotar ne gyinabew nkͻ sor. Mbuukuu a wͻkyerɛkyerɛ nsɛm ase (Lexicons) kyerɛ kasafua “Sabr” (kasafua yi yɛ Arabic kasa mu ‘abotar’) ase dɛ etsim wͻ abotar mu wͻ ber a nnkɛkasa ho, ebɛma Nyankopͻn Ne pɛ ayɛ hͻ, na ahyɛ dzen wͻ enyigye mu. Dɛ ebɛma wo nokwardzi na w’ahobrase mu gyedzi wͻ Nyankopͻn mu egyina pintsinn wͻ kwan biara, wo nkakua wͻ Nyankopͻn ho ayɛ dzen na epa twer No na igyina pintsinn wͻ ne nkyerɛkyerɛ mu. Nyankopͻn ka dɛ iyi yɛ abotar gyinabew a sɛ obi dze noho to do a onya Nyankopͻn Ne nhyira. Nyankopͻn mma No nkowaa anokwarfo mmbrɛ kwa.
Sɛ obi sie abotar a ͻma onya Nyankopͻn Ne nhyira. Nyankopͻn mma No nkoa ennyɛ gyan. Sɛ obi dze no werɛ hyɛ Nyankopͻn No mu a, Otua no kwaw. Nnyɛ abotar nye dɛ bɛtsena ase koom. Ɔwͻ dɛ nyimpa no yɛ asͻr a wͻhyehyɛ no dɛ mbrɛ ͻfata, mpaabͻ na botu woho ama Nyankopͻn wͻ ahobrase mu na ebisa N’adom. Obi a ͻbͻtwe no ho efi ne pɛ ho no na obotum ayɛ asͻr dɛ mbrɛ ͻfata. Obi a ͻrenndaadaa ͻnoara no ho. Obi a n’asͻryɛ nnkwetsir iyinom no, nnyɛ asͻr yie. Nyankopͻn nnhia dɛm nyimpa no. Ampaara dɛ, Nyankopͻn pɛ obi a ogyina pintsinn wͻ ahobrase mu wͻ Nyankopͻn N’afa mu. Hɛn ber do yi, Nyankopͻn kaa kyerɛɛ Anohoba Mɛsia (ANN) no dɛ M’enyi agye wo ahobrase akwan ho.
Dɛm ahobrase akwan yi na obuei akwan ahorow pii ma Anohoba Mɛsia (ANN) no. Sɛ obi pɛ dɛ onya dɛm adom yi na onya abotar no mu mfaso a, na wͻgye ne mpaabͻ to mu a, na ͻwͻ dɛ ͻdze noho ma Nyankopͻn na ogyina pintsinn. Iyi na ͻbɛgye no efi Abͻnsam nsa mu. Iyi na ͻbɛma ne gyedzi nto mu na ͻbɛn Nyankopͻn. Onnyi dɛ obi dwen dɛ ͻyɛ mberew dɛ obi benya ahobrase. Honam akͻndͻ wͻ hͻ, wiadze yi mu apɛdze nye ndzɛmba ahorow pii so wͻ hͻ a ͻmma obi nntum nnya ahobrase. Dɛm ntsi Kuran kyɛfa bi ka dɛ “Na ͻyɛ asɛm a ͻyɛ dzen”. Ahobrase yɛ adze son, na ndzɛmba pii siw nyimpa kwan ma wͻnnya gyinabew a ͻtse dɛm. Ɔwͻ dɛ ber biara yɛdwen dɛ Nyankopͻn pɛ dɛ Ne mba kyerɛ abotar na wͻsom No dɛ wonnyi obiara bio ka No ho som no. Na Ɔnoara so aka dɛ, iyi nnyɛ adze a ͻda famu na obiara nnkotum eenya gyedɛ ͻnam N’adom do.
Dɛm ntsi hom ndan hom ho nkͻ Ne nkyɛn wͻ ahobrase mu na hom benya wͻ ahobrase nye gyedzi mu, “na Ne nkyɛn na hom bɛsan akͻ”. Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no fasusu pa no, mma hom mmfa no dɛ hom benya ho mfaso kɛkɛ, na hom mfa no dɛ hom dͻ no papaapa. Hom nnya ͻdͻ a ͻyɛ dzen wͻ akoma mu na hom ndzi n’ekyir. Iyi na ͻma gyedzinyi gyinabew a ͻkrͻn na Nyankopͻn aka dɛ nyia odzi iyi ekyir no, onya Nyankopͻn No dͻ na Allah so bͻdͻ no na wͻaka dɛ “na Ne nkyɛn na wͻbɛsan akͻ”. Sɛ yɛbͻ mpaa ma Nyankopͻn dɛ Ɔno na ͻwͻ tum nyinara na dɛ yɛnnsɛ hwee a, na yɛpɛ dɛ Ɔgye hɛn mpaabͻ to mu, na Ɔma hɛn ahobrase. Na ͻwͻ dɛ hɛn so yegyina pintsinn wͻ asͻryɛ na abotar do.
Na sɛ hɛn mbͻdzenbͻ, hɛn asͻryɛ nye hɛn ahobrase mu wͻ sintͻ bi a, Ɔdze bɛkyɛ hɛn, ama hɛn tsir mu ayɛ hɛn dɛw na mbom yɛngyina pintsinn wͻ aohbrase nye asͻryɛ mu. Yɛbͻ mpaa serɛ dɛ yɛbɛka nkorͻfo a wͻyɛ ahobrasefo no a Nkͻmhyɛnyi aka afa hͻn ho dɛ ͻnam hom ahobrase ntsi, Nyankopͻn akrͻn hom kͻ sor nsamdo esoun no do. Yɛbͻ mpaa dɛ Nyankopͻn mboa hɛn ma yɛmbͻ hɛn bra wͻ kwan a Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no na n’akadofo pɛ dɛ yɛbͻ ͻnye dza Anohoba Mɛsia (ANN) no pɛ dɛ yɛyɛ. Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ, sɛ obi yɛ bͻn nketsenketse mpo a, nkakrankakra ͻdze no kͻ bͻn akɛse mu, ara a ma ͻba no dɛ onntum nntwe noho mfi bͻn ho. Osiandɛ ndzɛmba pii dze hͻn ho gye mu. Nyimpa yɛ ahobrase naaso binom yɛ ntsɛn, ahomado na ͻyɛ tsirmudɛw. Gyedɛ obi yi dɛm ndzɛmba yi nyinara fi n’akwan mu na ͻbrɛ noho ase ma Nyankopͻn ansaana woeyi iyinom nyinara akwa.
Kabir ka no nokwar mu dɛ “ͻwͻ dɛ yɛbrɛ hɛn ho ase na yedzi kan kyia obiara, sɛ yɛma hɛn ho do a, yɛbɛyɛ dɛn ehu Nyankopͻn? Ɔkyerɛ dɛ yɛda Nyankopͻn ase dɛ wͻwoo hɛn wͻ ahobrase ebusua mu. Sɛ wͻwoo hɛn wͻ sika ebusua mu a, nkyɛ yɛbɛyɛ dɛn ehu Nyankopͻn? sɛ nkorͻfo bi yɛ ntuw wͻ hͻn edzikanfo ho a, Kabir dze, ͻyɛ ndaasefo wͻ n’ahobrase ebusua ho. Nyimpa wͻ dɛ, ber biara osusu dɛ ͻnnsɛ hwee na ͻyɛ ahobrase. Sɛ obiara yɛ ahobrase na ͻammfa n’ebusua enntuuw no ho a, na ͻdwen n’abrabͻ mu a, obohu dɛ ͻwͻ dɛ ͻyɛ ahobrase na ͻnnsɛ hwee na ͻmmfata nsorma mpo. Nyimpa nnkotum ahɛn Nyankopͻn N’ahenman no mu gyedɛ onya enyidze ma mbaa nye mbanyin mpanyimfo tse dɛ ma onya ma abrenpͻn na ͻbͻ noho ban fi ahantan akwan nyinara ho.
Ɔnam nsesa kakraabi do, subanpa botum adan abɛyɛ subanbͻn. Nyankopͻn ebuei kwan bi ama N’abͻdze, na dɛm kwan yi nye mpaabͻ. Sɛ obi dze su na adze serɛ dze hɛn dɛm abobow yi mu a, ͻno Nyankopͻn ma no ahotsewee na Ɔdom no kɛseyɛ, na ͻtwe noho kͻ ekyirkyiirkyir fi nsɛmhun na ndzeyɛɛhun ho. Ebɛnadze ntsi na sɛ obi gye Nyankopͻn dzi a, ͻnntwe noho mmfi bͻn ho? Nokwar a ͻwͻ mu nye dɛ, nyimpa wͻ su bi a ͻmma ͻnngye Nyankopͻn nndzi yie ma onnsi pi. Sɛ onyim dɛ Nyankopͻn bi wͻ hͻ a Ɔwͻ tum dɛ Ɔsɛe no wͻ sima kor bi mu a, ͻbɛyɛ dɛn na wͻayɛ bͻn?
Hadith ka dɛ, obiara nnwia adze wͻ aber a ͻyɛ gyedzinyi. Obi botum atwe noho efi bͻn ho wͻ ber a obenya ntseasee dɛ Otumfo Nyankopͻn N’asotwe san famu dɛ asraman na ͻhyew biribiara dɛ ogya. Sɛ Nyankopͻn Ne Kɛseyɛ tse obi n’akoma mu a, nna ͻma ͻtwe noho fi bͻn ho. Nkwagye wͻ dɛm sunsum mu nyimdzii yi mu. Ɔdͻ gyina sunsum mu nyimdzii do na otu kafo. Ndzɛmba ebien na ͻma ͻdͻ mu yɛ dzen, ͻno nye ahoͻfɛw na adom. Obi a onnyim Nyankopͻn N’ahoͻfɛw na N’adom no ͻbɛyɛ dɛn adͻ Nyankopͻn? Na Allah Ɔsorsornyi no aka dɛ “Na wͻrennhɛn ture no mu kɛpem dɛ efupͻnkͻ ne tsir bɛhɛn droba n’enyiwa mu” (7:41). Iyi kyerɛ dɛ hͻn a wͻnngye nndzi no nnkotum ahɛn sor ahenman no mu gyedɛ efupͻnkͻ ahɛn droba n’enyiwa mu.
Nyimdziifo akyerɛ iyi ase dɛ mbrɛ ͻtse yi ara. Naaso me ka dɛ nyia biara a ͻrohwehwɛ nokwar nkwagye no hyew n’akͻndͻ ara ma ͻmba no dɛ obotum ahɛn droba enyiwa mu wͻ sunsum mu. Osiandɛ honam akͻndͻ wͻ hͻ dza, ͻronntum mmfa Shariah mbra kwan do nkͻ ahenman mu. Na obokum no honam akͻndͻ nyinara na woenya Nyamesuro yie. Iyi nkotoo na ͻbɛma obi etum afa kwan yi do na iyi so ara na ͻbɛyɛ no nkwagye kwan wͻ no wu ekyir na ͻdze no akͻ ahenman mu.
Kɛtseankyɛ, susuampaara a yɛyɛ Jama’at yi, ankorankor Ahmadiyyanyi biara bodu botooyɛ na ahobrase mpɛnpɛndo a hɛn abotar besi pi na Nyankopͻn a yɛresom No no so si pi na Ɔgye to mu. Kɛtseankyɛ hɛn abotar na hɛn asͻryɛ asow aba wͻ hɛn Wuekyir na Wiadze yi mu a wiadzemba nyinara bedzi ho dase dɛ yɛyɛ Jama’at (Okuw) a Anohoba Mɛsia (ANN) no dze bͻbͻͻ adze, Jama’at a ͻdze botooyɛ bͻ no mu adze ma Nyankopͻn, otua no Nyamesom ho ntoboa na ͻdze botooyɛ dzi Ne nkyerɛkyerɛ do. Na Jama’at no ͻper hwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye na odua mpaabͻ na asͻryɛ do dze nsakyer ba wiadze yi mu. Ɔnndan noho mma wiadze ber a ͻakɛhɛn ber a ͻyɛ dzen na ahohiahia mu, nokwar nye yi, ͻdan noho kͻ Nyankopͻn No a Ɔwͻ tum wͻ biribiara do na Otum ka ͻtanfo no hyɛ sɛ ͻwͻ akodze nyinara mpo a. Ber a wiadzemba bohu iyi no ͻbɛyɛ nhyɛ ama hͻn ma wͻaka dɛ woyinom na nokwar mu, wͻyɛ agyedzifo nokwarfo no a wotum hu Nyankopͻn wͻ hͻn mu no; hͻn a woenya hͻn Ewuradze noho dͻ no. Woyinom nye nkorͻfo no a wobotum akyerɛ wiadze akwan a wodua do hu Nyankopͻn.
Yɛserɛ Allah dɛ Ɔma yeenya dɛm gyinabew yi na dɛ mbrɛ Anohoba Mɛsia (ANN) kaa no, dɛ nkyɛ ankorankor biara bɛfa botooyɛ na hɛn dͻ mu adͻr ama Nyankopͻn ama nkwagye wͻ ndaankͻamba ayɛ hɛn dze!
Hom mma yɛnsͻr mma Ahmadiyyafo a wͻwͻ Pakistan osiandɛ wͻwͻ ahokyer mu. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn nto hͻn gyedzi mu na wͻnye Nyankopͻn ho nkitahodzi no nkͻ kan. Pakistanfo hͻn ankasa nyɛ asͻr dzendzeendzen mma hͻn gyedzi ho. Kɛtseankyɛ Nyankopͻn ama obiara enya Nyankopͻn ho mbɛnee!